နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုလက်ညှိုး, ဥပမာနဲ့သူတို့ရဲ့ဓိပ်ပာယျနှငျ့စကားထူး? | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
ကျွန်မမိနစ်ဘုံ idiomatic expression ကိုနဲ့စတင်ပါလိမ့်မယ် သုံးလက်ချောင်းများပေါင်းစပ်.
ဒါခေါ်သာမန်သင်္ဘောသဖန်း, သင်္ဘောသဖန်း။ တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပာယ်အပြင်, ဒီလည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်မကြာခဏပုံဆောငျသဘောအရကိုအသုံးပြုသည် - Quote; လှည့်ဖြားရန်, မည်သည့် prosbequot အတွက်မည်သူမဆိုငြင်းပယ်။ ,
ဥပမာအားဖြင့်။ အကြီး, ငါ့လစာမြှင့်ဖို့ကတိပေးခဲ့ပေမယ့်ငါ့အားပြ သုံးလက်ချောင်းများပေါင်းစပ်.
သူကပြောနေလိုအပ်ပါကမိမိတို့အဘို့ကိုတက်မတ်တပ်ရပ်ဖို့ဘယ်လိုသိတယ်, ဒါမှမဟုတ်တစ်စုံတစ်ဦးရဲ့ bobble ၏အားသာချက်ယူနိုငျသောသူတစ်ဦးကြီးကြပ်မှု, သူတို့ရဲ့မျက်နှာသာအတွက်လက်ရှိအခြေအနေ၏ရလဒ်အဖြစ်အသုံးပြုရန်အတွက်အမှား, ခံတွင်း၌လက်ချောင်း (လက်မ) ကိုမထားဘူးထို့ကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးနှင့်အတူအလွန်သတိထားပါမှတားဆီး။
အားလုံးမိမိစိတ်ဝိညာဉ်နှင့်အတူမည်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း (သို့မဟုတ်တစ်စုံတစ်ဦး) မှမိမိတို့ကိုယ်ကိုအပ်နှံသူတွေကိုဘဝမှာတခြားရှုထောင့်အားဖြင့်အာရုံခံခြင်းမရှိဘဲ, လုံးဝရှိပါတယ်။ အဲဒီမှာတယောပုံရိပ်ကိုဖန်တီးသောသူတို့ဖြစ်ကြပြီးအသေးဆုံးအသေးစိတ်ကဆင်းကပ်, ထိုကဲ့သို့သောအမြဲနှင့်နေရာတိုင်းဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ဖြစ်ကြောင်း, သူတို့ကိုအကြောင်းပြောဆို (သို့သော်မပေးအခြားသူတွေ) အဆိုပါလက်ချောင်းထိပ်မှ။ အသိဉာဏ်တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်ဥပမာ, ဒီမိုကရက်, အဆိုပါလက်ချောင်းထိပ်မှ။ လူငယ်တွေကတစ်ဦးအမျိုးသမီးသင်ယူနားလည်ချင် အဆိုပါလက်ချောင်းထိပ်မှ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတွေကိုအတွက် idiomatic expression ကိုပလီကေးရှင်းတစ်ခုကအလွန်ကျယ်ပြန့်။
သငျသညျပိုက်ဆံကသူ့အိတ်ကပ်ထဲကနေလျင်မြန်စွာပျောက်ကွယ်သွားလေ့? သူတို့ကချက်ချင်းနှင့်တိတ်တဆိတ်သုံးစွဲပြီး, သုံးစွဲကြသနည်း
သဲကွာသင့်ထံမှပြောင်းရွှေ့လိုပဲရေလိုပဲ။ မိမိအလက်ချောင်းများမှတဆင့်, သူ့လက်ချောင်းများအကြားမျော.
သငျသညျသုံးဖြုန်း, ပင်ကကိုသတိပွုမိခြင်းမရှိဘဲ, ကဖြုန်းနေကြတယ်။ နောက်တဖန်အရာတစ်ခုခုသတိမမူဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်မှားဘာမျှမသိမမြင်ရဖြစ်ပါတယ်စရာရှိသောကြောင့်တမင်တကာတစ်ခုခုမှအာရုံစိုက်မရသည့်အခါသင့်လျော်သောတဦးတည်းကိုသုံးနိုင်သည်စကားထူး။ တန်ဖိုးစကားထူး (သတိထားရမှာမဟုတ်) - သင့်ရဲ့လက်ချောင်းဖြတ်သန်း.
သူကိုမပေးနိုင်သို့မဟုတ်သူဟုထွက်သယ်ဆောင်ရန်တစ်ခုခုလုပ်ဖို့ဆိုအားထုတ်မှုယူလိမျ့မညျမဟုလူတအကြောင်း (မရွှေ့) တစ်ဦးလက်ချောင်းရုတ်သိမ်းပေးရန်မဟုတ်.
မကြာခဏတစ်စုံတစ်ဦးကိုတစ်စုံတစ်ဦးကတော့လို့သောစွပ်စွဲချက်ကိုတုန့်ပြန်, သငျသညျနားထောငျနိုငျသညျ, ဒါပေမဲ့သူကသူ့ ငါထိမိတော့မှ.
idiomatic လက်ချောင်း (မထိကြဘူး) မထိပါဘူး ဒါဟာ Quote ဆိုလိုတယ်; မည်သူမဆိုရိုက်နှက်, မဆို vredaquot ဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါမ; ။
ထိုသို့ကောင်းစွာအားလုံး phraseologism မှလူသိများသည် လက်ချောင်း (လက်ချောင်းများ) လှကျြ.
ရုံ, yummy; လူတိုင်းနီးပါးအလွန်အရသာရှိတဲ့အရာတစ်ခုခုကိုမြည်းစမ်း Quote ဆက်ဆက်လွှတ်တော်ခဲ့သည် အစစ်အမှန်ယို။ ဤရွေ့ကား, အိမ်ရှင်မများ၏အမြင့်ဆုံးကိုခြီးမှမျးဖြစ်ပါသည်, သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အစားအစာများချက်ပြုတ်။
Палец о палец не ударить — не предпринять даже малейших усилий.
Показывать пальцем — переключать на кого-то внимание (чаще отрицательное).
Ему дай палец, всю руку откусит — о том, кто неумерен в своих запросах.
နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကို Quote နှင့်အတူထားစာပိုဒ်တိုများ Add; paletsquot;
Сквозь пальцы смотреть — то есть, специально не замечать чего-нибудь недозволенного.
Вокруг пальца обвести — обхитрить, обмануть кого-то.
Как свои пять пальцев — знать что-либо очень хорошо, досконально.
Высосать из пальца — придумать небылицу, что-то неправдоподобное.
Попасть пальцем в небо — промахнуться мимо цели.
21 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,351 စက္ကန့်ကျော် Generate ။